नियम त बन्यो कार्यान्वयन खोइ ? अझै झुमिरहन्छ रक्सीले सार्वजनिक कार्यक्रम – Halkaro
नियम त बन्यो कार्यान्वयन खोइ ? अझै झुमिरहन्छ रक्सीले सार्वजनिक कार्यक्रम
काठमाडौँ । घटना १ः करिब ३ हप्ताअघि काठमाडौंस्थित एक तारे होटलमा औषधी आयातकर्ता संघको एउटा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम राति निकै बेर लम्बियो। प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा बेलुकी करिब ८ बजेतिर भाषण सकेर निस्कनुभयो। तर, आयोजकले भने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरूलाई बियर तथा भोड्कासहितको डिनर चलायो। डिनरमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र काठमाडौंस्थित जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि मादक पदार्थसहितको डिनर चलिरहेको पाइन्छ। सेनाले गर्ने कार्यक्रममा होस् या अन्य सुरक्षा निकायको कार्यक्रममा पनि यसप्रकारका गतिविधि देख्ने गरिएको छ। यद्यपि सरकारले नै त्यसखालका मादक पदार्थ सेवन गर्न नमिल्ने नियम नै बनाएको छ।
← मालिकबाट बलात्कृत किशोरी न्यायको लागि प्रहरी शरणमा
कछुवाको गतिमा मेलम्चीः असोजसम्म अाउनेमा शंका →